कहाँ छन् विप्लव ? यसरी ल्याइदै काठमाडौं ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > कहाँ छन् विप्लव ? यसरी ल्याइदै काठमाडौं !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई काठमाडौं ल्याउन सरकारी पक्षले हेलिकोप्टर ‘स्ट्यान्डबाई’ राखेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार एक निजी कम्पनीको हेलिकोप्टर ‘स्ट्यान्डबाई’ राखिएको हो । सरकार र विप्लव नेकपाबीच आज भएको तीनबुँदे सहमतिपछि विप्लव सार्वजनिक हुने भएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवले भोलि राजधानीमा एक कार्यक्रमलाई संयुक्त रूरुपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
विप्लव कहाँ छन् भन्ने खुलाइएको छैन । स्रोतले भन्यो, “विप्लवलाई ल्याउन हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा छ । उनी कहाँ छन् थप जानकारी छैन । भोलि सबै कुरा खुल्नेछ ।” विप्लव पछिल्लो तीन वर्षयता सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन् । तर, पार्टीनिकट सञ्चारमाध्यमलाई भने उनले अन्तर्वार्ता दिँदै आएका थिए । विप्लव नेकपामाथि ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै ०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । दुवै तर्फका वार्ता टोलीबीच आज विहान भएको चौथो चरणको वार्तापछि तीन बूँदे सहमति भएको हो । सहमतिपछि महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सार्वजनिक हुने भएका छन् । भोलि हुने एक विशेष विशेष समारोहकाबीच महासचिव चन्द सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।
समारोहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चन्दले सम्बधोन गर्ने तय भएको छ । चन्द पछिल्लो तीन वर्षयता भूमिगत अवस्थामा रहनुभएको छ । सरकारसँग तीन बुँदे सहमति भएपछि विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सहमति भएको हो। सहमतिसँगै सरकारले विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको छ। सरकारले विप्लव समूहका पक्राउ परेका सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी गर्ने सहमतिसमेत गरेको छ।
वार्ता लागि नेपाल सरकारबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा र विप्लव समूहबाट पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ को नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भएको थियो। सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रबार २ बजे एक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव समूहका महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्ने प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ।
एउटै युवतीलाई दुई जनाले नै मेरो श्रीमति हो भन्दै बिहेको फोटो देखाउदै मिडियामा आएपछि…(भिडियो सहित)
चीनले दियो भारतलाई यस्तो चेतावनी: सीमानामा जे भइरहेको छ हेरिरहेका छौ
बिहानै फेरी आयो अर्को ठुलो दुखद खबर : यस्तो कसैलाई नहोस् (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
न्यू होराइजनकी सुम्निमाको जीपीए ४ हासिल गर्ने नेपाली चेली बनिन्